Ndị a bụ ndụmọdụ ise banyere otu esi eji taya ụgbọ ala gị. Ọ bụrụ na ị mara ihe karịrị atọ, ị dị mma! -News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Ndị a bụ ndụmọdụ ise banyere otu esi eji taya ụgbọ ala gị. Ọ bụrụ na ị mara ihe karịrị atọ, ị dị mma!
Oge: 2021-04-06 Hits: 13
Tiregbọ ala ụgbọ ala ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ịkwọ ụgbọ ala?Taya ndị ka mma na-eme ka ịkwọ ụgbọala na-atọ ụtọ, nke na-emekwa ka ịnya ụgbọ ala dị mma.Na nso nso a otu enyi jụrụ, mgbe anyị na-akwọ ụgbọala, ụgbọ ala na taya na-mgbe araparawo obere okwute, oké njọ mgbe a ga-enwe ụfọdụ iko slag.Ọ bụ ezie na taya abụghị nnukwu ihe, ekwesịrị ịpụpụ ha?
Gbaa mbọ hụ na taya gị dị ọcha
Mmetụta nke usoro ụgbọala bụ iji meziwanye ike taya ahụ, kamakwa ọrụ ịgbapụ taya na ike ikpo ọkụ na-abawanye.Taya mgbe ogologo oge ịkwọ ụgbọala ga-eyi na akwa, nnukwu ọnwụ bụkwa iji dochie.Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ nkume na taya ahụ, ọrụ nsị ọka na njigide ga-ada, ụfọdụ n'ime mmiri ndị dị mmiri mmiri dịkwa mfe iduga n'ihe ize ndụ nchekwa!
Ọ bụrụ na nkume dị na taya ahụ araparawo, n'ihi na okwute anaghị adịkarị, enwere nnukwu mfu maka taya na nzọ ụkwụ.Ọ ga - ebelata ndụ nke taya ahụ, mana ọ na - edugakwa na nkwụsị na taya.
Ya mere, enwere ụfọdụ sundries na taya ahụ, nke dịkwa mkpa ka a kpochaa ngwa ngwa o kwere mee, ma chọpụta ma taya ahụ na-agbapụ.Ọ bụ ezie na nke a bụ nsogbu karịa, kamakwa maka ịnya ụgbọ ala, kamakwa ihicha ozugbo enwere ike!
2. Anaghi anupula ntu ntu ozigbo
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji ụgbọ ala agụụ eji ụgbọ ala, ọ bụrụ na ọ zutere ntu na ọnọdụ taya ahụ, ọ gaghị ewepụ ya ozugbo.Ọbụna ma ọ bụrụ na punchured ntu, ụgbọ ala na taya ga-ehi ehi na wupu ozugbo n'ihi nke agụụ n'ime.Ọ bụrụ na a dọpụrụ ya n'oge a, ọnọdụ agụụ dị n'ime ya na-emetụtakwa, na taya ụgbọ ala ahụ dị mfe nkwụsị, nke nwekwara mmetụta na ịkwọ ụgbọala!
Ọ bụrụ na ị ga-ezute site na tie ọnọdụ ntu, nke ahụ bụkwa ịchọ ịchọta ụlọ ndozi dị nso ozugbo enwere ike imezi ọzọ jupụta taya!
3. Ọ dịghị mkpa ịme igwe ụkwụ anọ
Mgbe ị na-agbanwe taya, ụlọ nrụzi ahụ ga-ajụkwa gị ka ị mee nhazi ụkwụ anọ.Ọ bụrụ na ị dị nnọọ ịgbanwe taya, mgbe ahụ, ime anọ wheel n'ọnọdu na-abụkarị o yikarịrị ka ọ ga-enwe mmetụta na ụgbọ ala ịnya ụgbọ ala, ma ọ bụrụ na ụgbọ ala otu oge gbanwere 4 taya, ọ dị mkpa ime, n'oge a na taya arụmọrụ na ndị agadi na ndị ọhụrụ ọnọdụ dị iche iche, emela anọ wheel n'ọnọdu dịkwa mfe inwe mmetụta na taya ịkwọ ụgbọala!
4. Taya ụgbọ ala ga-agwa gị mgbe ị ga-agbanwe ya?
N’ezie, ụlọ ọrụ taya nwere akara njikọ aka na taya ahụ, bụkwa nke a na-etolitekwa na ntanye nke taya ahụ.Mbibi ụgbọ ala ụgbọ ala iru ọnọdụ a bụkwa iji dochie taya ụgbọ ala ọzọ!
5. Oge a tụrụ aro na-abụkarị afọ atọ na isii.Anyị na-atụ aro na taya ejiri n'ime ọnụ ọgụgụ nke afọ, dị ka ọnwụ nke steeti obibi nnọchi!
Car taya bụkwa ihe isi bekee, anyị kwesịrị n'okpuru na-ịnọgide na-enwe mma.Ọ bụ ezie na ọ bụ ụfọdụ dịtụ obere nkọwa nke ihe, ma naanị obibi a obere nkọwa nke ihe, ma nwekwara ike ime ka ha na-akwọ ụgbọala ọzọ mma!
Previous: Ndụmọdụ maka ịrụzi taya ụgbọala
Ọzọ: You ma ka esi eji taya ụgbọ ala?